Xafiiska xoolaha iyo horumarinta Reer-guuraaga DDSI oo wada dadaalo kor loogu qaadayo tayada xoolaha deegaanka. - Cakaara News
Xafiiska xoolaha iyo horumarinta Reer-guuraaga DDSI oo wada dadaalo kor loogu qaadayo tayada xoolaha deegaanka.
Jijiga (CN) sabti, 21, November, 2015, Sidaad warar ka yagii hore kula socoteen waxaa dhawaan kaabinega DDSI ansaxiyay in dib u habayn lagu sameeyo qaarka mid ah xafiisyada heer deegaan taasi oo uu ka mid ahaa xafiiskii hore loo odhan jiray xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reermiyiga DDSI.
Waxaana laga kala dhigay laba xafiis oo kala ah xafiiska xoolaha iyo horumarinta reer’guuraaga DDSI iyo xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee DDSI waana qorshe gashi horumarineed u ah xoojinta awood siinta wax soo saarka beeraha iyo kor u qaadida nolosha bulshada xoolo dhaqatada.
Haddaba xafiiska xoolaha iyo horumarinta reer- guuraaga DDSI ayaa waxaa wasiir looga dhigay mudane Cabdinuur Colow Axmed hore u ahaan jiray wasiir ku xigeenka xafiiskii xoolaha beeraha iyo horumarinta reermiyiga DDSI.
Wuxuuna warbaahinta deegaanka uga waramay hawlaha lagu dar dargalinta shaqada xafiiska xiligaasi oo uu kulan kula jiray kooxo xirfadlayaal caafimaad ka xoolaha ah oo loo kala dirayay degmooyinka deegaanka si ay daawayn iyo talaalka xoolaha uga soo fuliyaan Gobolada iyo degmooyinka deegaanka.
Waxaa kale oo uu wasiirku sheegay in xukuumada DDSI oo ka duulaysa taabo galinta meel marinta qorshayaasha horumarineed ay ahmiyada siiyay in xafiisyada dib loo habeeyo oo xooga la saaro kor u qaadida nolosha bulshada xoolo dhaqatada ah iyo tayaynta tayada xoolaha deegaanka, waxaanan hada kooxahan u diyaryaa ayuu yidhi wasiirku maadaamo oo la gaadhay wakhtigii ay xooluhu iman jireen ceelasha waawayn ee deegaanka ee ay xooluhu u soo biya doontaan gaar ahaan ceelasha waawayne ee bulaale, ceel xaar, sulul, malayko iyo ceelal kale oo muhiim ah taasina ay ka mid tahay hirgalinta xidhmaha horumarka xoolaha deegaanka.